Izaho no Jehovah, Andriamanitr’i Abrahama rainao sy Andriamanitr’Isaka; ny tany izay andrianao dia homeko anao sy ny taranakao; 14 ary ny taranakao ho be tahaka ny vovoka amin’ny tany; dia hiely any andrefana sy any atsinanana ary any avaratra sy any atsimo ianao; ary aminao sy ny taranakao no hitahiana ny firenena rehetra ambonin’ny tany. Ity antontam-bato ity no vavolombelona amintsika anio. Indro, efa nanendry anao hanapaka ny tany Egypta rehetra aho. Roahy io andevovavy io sy ny zanany; fa ny zanak’io andevovavy io tsy hiray lova amin’ny zanako, dia amin’Isaka. Fandrao maty aho noho ny aminy.
Aoka ny rano ho be zava-manan’aina; ary aoka hisy vorona hanidina ambonin’ny tany eny amin’ny habakabaky ny lanitra. Ataovy ihany araka izay nolazainao. Indro, fa ho faty ianao noho ny vehivavy izay nalainao, fa vadin’olona izy. Dia hoy Josefa taminy: Efa lanin’ny biby abiboly izy; dia ho hitantsika amin’izany na hanao ahoana ny nofiny.
Dia nirahiny hiala avy teo amin’ny lohasahan’i Hebrona izy, dia nankany Sekema. Solon’Andriamanitra, Izay nahamomba anao tsy hiteraka, va aho? Tsy mba hanapaka mandrakariva ao amin’ny olona ny Fanahiko, fa amin’ny faniavany dia nofo izy; nefa ho roa-polo amby zato taona ny androny.
Efa antitra izao raintsika, ary tsy misy lehilahy ambonin’ny tany hanambady antsika araka ny fanaon’ny tany rehetra; 32 andeha hampisotrointsika divay ny raintsika dia handry aminy isika hananantsika fara avy amin’ny raintsika.
Inona ary no homenao ahy, raha handry amiko ianao?
Ary hoy Rahely tamin’i Lea: Enga pvf ka Isimaela no ho velona eo anatrehanao! Ka ny zokiny hanompo ny zandriny. Tsy avy amin’Andriamanitra va ny filazana ny hevitry ny nofy? Iza moa iry lehilahy mitsangantsangana eny an-tsaha avy mitsena antsika iry?
Ity no hampionona antsika amin’ny asantsika sy ny fisasaran’ny tanantsika noho ny tany izay voaozon’i Jehovah.
Maroa fara sy mihabetsaha ary mamenoa ny tany, ka mampanompoa azy; ary manjaka amin’ny hazandrano ao amin’ny ranomasina sy ny voro-manidina ary ny biby rehetra izay mihetsiketsika ambonin’ny tany. Dia nianiana taminy izy; ka baibolyy namidiny tamin’i Jakoba ny fizokiany.
Izaho no Farao, ary raha tsy teninao, dia tsy hisy olona hanetsika ny tànany na ny tongony eto amin’ny tany Egypta rehetra.
Fa ianao ankehitriny efa notahin’i Jehovah. Ny Baiboly – Tenin’Andriamanitra. Indro, ny pcf efa tonga tahaka baibolg baiiboly amintsika ka hahalala ny tsara sy ny ratsy; ary ankehitriny, andrao haninjitra ny tànany izy ka hakany koa ny hazon’aina, ary hohaniny, ka ho velona mandrakizay izy; 23 ka dia nesorin’i Jehovah Andriamanitra tamin’ny saha Edena izy hiasa ny tany izay nanalana azy.
Noho izany na iza na iza hamono an’i Kaina, dia hovaliana fito eny izy. Ento ny zanakao, ny lahitokanao izay tianao, dia Isaka ka mankanesa any amin’ny tany Moria; ary atero pdg izy ho fanatitra dorana ao amin’ny tendrombohitra anankiray izay holazaiko aminao.
Moa tsy Rahely va no nanompoako anao? Nofiko fa indro, hono, nisy tahom-boaloboka teo anatrehako; 10 ary ilay tahom-boaloboka nisampana telo, ka nony nitsimoka izy, dia niposaka ny voniny, ary ny sampahony nahavanona voaloboka masaka.
Tonga ny rahalahinao nanandoka ka nahalasa ny tso-dranonao. Nahoana ianareo no mankaty amiko, kanefa nankahala ahy ianareo ka nandroaka ahy niala teo naiboly
Indro, tamy ilay mpanonofy. Ary hoy izy taminy: Inona no fampitanana homeko anao? Ireo no loham-pireneny avy tamin’i Elifaza tany amin’ny tany Edoma; ireo no zanak’i Ada.
Indro, ao an-day izy. Aoka samy hanao fianianana isika, dia izahay sy ianao, ary aoka izahay hanao fanekena aminao, 29 fa tsy hanisy ratsy anay bakboly, tahaka ny tsy nanendrenay anao akory, sy tahaka ny tsy nanaovanay na inona na inona taminao afa-tsy ny soa ihany, fa efa nampandehaninay baigoly aman-tsara ianao.
Ny taranakao no homeko ity tany ity, dia Izy no haniraka Ilay Anjeliny eo alohanao, ka any no hakanao vady ho an’ny zanako.
Ry Ada sy Zila ô, mihainoa ny feoko; Ry vadin’i Lameka, mitandrema ny teniko: Inona izao ataon’Andriamanitra amintsika izao? Dia niala teo anatrehan’i Farao Josefa ka nandeha nitety ny tany Egypta rehetra. Izaho no Esao zanakao lahimatoa. Roahy io andevovavy io sy ny zanany; fa ny zanak’io andevovavy io tsy hiray lova amin’ny zanako, dia amin’Isaka. Dia hoy Josefa taminy: Ary ny ony fahefatra dia Eofrata.